Go’aaminta Xaaladda Qaxoontiga (RSD) - UNHCR Egypt
Go’aaminta Xaaladda Qaxoontiga (RSD)
UNHCR Masar waxa ay bilawday in ay waraysiyada RSD ku qaado meel fog si ay u awoodo in aan sii wadno u adeegida magangalyadoonkeena iyada oo la yareeynayo khatarta faafitaanka COVID-19. Waxaad wax badan oo ku saabsan habka waraysiga fog uga heli kartaa muuqaalkan:
1.	Waa maxay ujeedada waraysiga go'aaminta xaaladda qaxootinimo?
Wareysiga RSD waa inuu kaa caawiyo inaad soo gudbiso kiiskaaga oo aad si buuxda u sharaxdo khibradahaaga iyo duruufahaagii kugu horseeday inaad ka soo cararto dalkaagi hooyo. Iyada oo ku saleysan wareysiga, UNHCR waxay go’aamin doontaa inaad buuxisay qeexida qaxoontiga iyo in kale waxayna siin doontaa aqoonsi qaxooti sida uu qabo sharciga caalamiga ah ee qaxootiga.
2.	Wareysiga go'aaminta xaalada qaxootiga
Marka laguu qorsheeyo waraysiga go’aaminta xaalada qaxoontiga (RSD), waxaad heli doontaa jadwal jadwal ah oo lagugu wargalinayo waraysiga RSD iyo latalinta talaabooyinka aad qaadayso ka hor waraysiga. Jadwalka jadwalka ka dib, waxaad heli doontaa SMS oo leh xidhiidhka arjiga Signalka, haddii aad ogolaatay inaad waraysi fog la yeelato. Intaa waxaa dheer, mareegta RSD ee rsd.unhcregypt.org/refugeeresult.aspx ayaa lagu cusboonaysiin doonaa taariikhda ballantaada sidoo kale. Maadaama ay jiri karaan isbeddelo ballamaha RSD, waxaa sidoo kale lagaa codsanayaa inaad si joogto ah u hubiso mareegaha, gaar ahaan 48 saacadood ka hor ballanta RSD.
Inta lagu jiro nidaamka RSD, waxaa lagaa rabaa:
Soo gudbi dukumeenti kasta iyo caddayn la heli karo oo ku saabsan codsigaaga;
U sheeg UNHCR xubnaha qoyskaaga ee ku wehelinaya. Xubnaha qoyska ee qaangaarka ah si gaar ah ayaa loo waraysan doonaa;
Run sheeg oo la wada shaqeeyo;
Hayso taleefoon casri ah oo leh kamarad hore oo shaqaynaysa iyo xidhiidh internet oo deggan, haddii aad ogolaatay in waraysi fog la qaado;
Keligay qolka, haddii aad ogolaatay inaad waraysi fog la yeelato.
Inta lagu jiro nidaamka RSD, waxaad xaq u leedahay:
Lagu wareysto luqad aad kula xiriiri karto;
In lagu matalo qareen ama wakiil sharci, kaas oo u qalma sida habraacyada la dejiyay ee UNHCR, inta lagu guda jiro nidaamkaaga RSD.
Fadlan sidoo kale ogow in:
Codsade kastaa waxa uu leeyahay muuqaal gaar ah, asal, iyo sabab uu uga cararo waddankiisa/keeda; sidaas awgeed, kiis kasta si gaar ah ayaa loo qiimeyn doonaa, iyadoo la raacayo qawaaniinta iyo nidaamka UNHCR.
Fadlan, ha u fiirsan wararka xanta ah ee lagu dhex faafinayo qaxootiga ee ku saabsan sheekooyin gaar ah oo loo soo bandhigi doono si lagu siiyo sharci qaxootinimo.
Si ula kac ah u marin habaabinta UNHCR ee ku saabsan xaqiiqada kiiskaaga ama aqoonsigaaga waa khiyaano. Fadlan ogow in tani ay si xun u saameyn doonto hab-socodka kiiskaaga oo ay u horseedi karto go’aan diidmo ah. UNHCR waxay xaq u leedahay inay qaado talaabooyinka ku haboon xaaladahan oo kale.
Bayaanadaada iyo dukumeentiyadaada waxa ay ahaan doonaan kuwo sir ah oo aanay UNHCR la wadaagin cid kale oo kale ogolaanshahaaga la’aanteed. Fadlan ogow in sinaba UNHCR aysan xogtaada ula wadaagi doonin dowladda wadankaaga hooyo.
Ha saxiixin wax dukumeenti ah ilaa aad akhrido, fahanto, oo aad ogolaato mooyee.
Inta aad Masar joogto adiga, sida ajaanibka kale, waxaa lagaa filayaa inaad ixtiraamto shuruucda, caadooyinka iyo dhaqanka bulshada ku martigelinaysa.
Hanjabaadaha afka iyo afka ah ee loo geysto shaqaalaha UNHCR waxay jebinayaan sharciga qaranka. UNHCR waxay ku wargelin doontaa qof kasta oo u hanjabaya booliiska, waxaana qofkan laga yaabaa in dacwad lagu soo oogo.
3.	Maxaan u soo qaataa waraysiga RSD?
Kaarka diiwaan gelinta magangelyo doonka ee UNHCR;
Dukumeenti kasta oo khuseeya taageeridda sheegashadaada qaxootinimo;
Adiga iyo qoyskaaga waraaqahooda aqoonsiga asalka ah (sida baasaboorada, kaararka aqoonsiga, buug-yaraha militariga, shahaadada guurka, shahaadooyinka dhalashada, warbixinnada caafimaadka haddii ay jiraan, iwm.);
Caddaynta diiwaangelinta hore ee xafiisyada kale ee UNHCR.
4.	Ma heli karaa wakiil/la-taliye sharci oo i caawiya inta lagu jiro nidaamka go'aaminta xaaladda qaxootinimo?
Waxaad xaq u leedahay inaad haysato wakiil/la-taliye sharci ah oo ku caawiya inta lagu jiro waraysiga go’aaminta xaaladda qaxootinimo. Masar gudaheeda, Saint Andrews’ Refugee Services (StARS) waxay bixiyaan macluumaad, latalin, tixraac, matalaad, iyo u doodista magangalyo-doonka iyo qaxootiga Masar ku sugan lacag la’aan, si aad wax badan uga ogaato sida loo gaaro STARS, fadlan eeg qaybta shuraakadayada hoos (Adeegyada ilaalinta).
5.	Maxay u jiraan habab kala duwan marka hore?
UNHCR Masar waxay leedahay habab kala duwan iyadoo ku xiran sida ay u adag yihiin kiisaska. Kiisaska qaarkood waxa la mariyaa is-diiwaangelinta iyo go’aaminta xaaladda qaxoontiga (RSD) si wada jir ah isla waraysiga, kaas oo loo yaqaan nidaamka Diiwaangelinta Isku-dhafka ah/RSD; xaaladaha qaarkood waxay leeyihiin diiwaangelin gaar ah iyo waraysiyo RSD; iyo xaaladaha qaarkood waxay leeyihiin wax ka badan hal waraysi RSD si loo hubiyo in xafiisku haysto qadar macluumaad ku filan si loo dhamaystiro nidaamka RSD.
6.	Maxaa dhacaya haddii aan seego ballan RSD?
Fadlan lagu wargeliyay in haddii aad ku guuldareysatid inaad ka soo qaybgasho ballan RSD adiga oo aan lahayn sharraxaad macquul ah, laga yaabo in kiiskaaga la xiro. Haddii aad dhaafto ballan, waa mas’uuliyaddaada inaad codsato mid cusub sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah adiga oo sharraxaya sababta aadan ula xiriiri karin xafiiska. Fadlan ogow in ballanta cusub la heli doono oo keliya haddii aad sharraxaad macquul ah ka bixiso sababta aad uga baaqatay ka qaybgalka.
7.	Xubnaha qoyskayga, ee iga diiwaangashan, ma laga rabaa inay goobjoog ka ahaadaan waraysiga go'aaminta xaaladda qaxootiga?
Dhammaan kuwa ka diiwaan gashan faylka waxay u baahan yihiin inay goobjoog ka ahaadaan waraysiga go’aaminta xaaladda qaxootiga ilaa lagugu wargeliyo si kale. Dhammaan xubnaha qaangaarka ah ee kiiska waxa ay la yeelan doonaan waraysi gaar ah UNHCR.
8.	Maxaa dhacaya haddii la ii aqoonsado qaxootinimo?
Haddii laguu aqoonsado qaxoontinimo, waxa lagu siin doonaa balan ogeysiin natiijada taasoo si cad u tilmaamaysa goobta, taariikhda iyo wakhtiga. Si aad go’aanka u qaadatid, waxaa lagaa doonayaa inaad u bandhigto shaqaalaha qaabilaada UNHCR kaarka diiwaan gelinta magangalyo doonka ee UNHCR iyo dukumeentigaaga aqoonsiga (Baasaboor ama nooc kale oo aqoonsi) markaad u soo dhawaato UNHCR.
Haddii laguu aqoonsado qaxoonti, adiga iyo kuwa kugu tiirsan waxa la siin doonaa kaarka qaxootiga ee UNHCR.
9.	Maxaa dhacaya haddii la ii diido sharciga qaxootinimo?
Haddii laguu diido aqoonsiga qaxoontinimo kadib waraysiga koowaad, waxa lagu siin doonaa balan ogeysiin natiijada taasoo si cad u tilmaamaysa goobta, taariikhda iyo wakhtiga. Si aad go’aanka u qaadatid, waxaa lagaa doonayaa inaad u bandhigto shaqaalaha qaabilaada UNHCR kaarka diiwaan gelinta magangalyo doonka ee UNHCR iyo dukumeentigaaga aqoonsiga (Baasaboor ama nooc kale oo aqoonsi) markaad u soo dhawaato UNHCR.
Taariikhda ballantaada, waxaad heli doontaa warqad go’aan diidmo ah, oo ka kooban sharraxaad ku saabsan sababaha keenay diidmada codsiga magangalyada. Haddii lagugu ogeysiiyo go’aan diidmo ah waxaad xaq u leedahay inaad ku soo gudbiso codsi racfaan 30 maalmood gudahood. Haddii aadan rabin inaad ka dacwooto go’aanka darajada koowaad ee lagu diidayo codsigaga magangalyada, mar dambe laguuma tixgelin doono qof ay khusayso UNHCR.
10.	Sidee baa la ii ogaysiinayaa go'aanka heerkayga qaxoontiga?
Marka go’aankaaga RSD uu diyaar yahay, waxaad heli doontaa SMS ama wac si aad u muujiso taariikhdaada/ballamaha natiijadaada. Waxaa lagugu ogeysiin doonaa go’aankaaga meel fog iyadoo loo marayo Codsiga Signal ama waxaa laguu ballansan yahay ogeysiin gudaha xafiiska. Shakhsi kasta waxa lagu wargelin doonaa habka, goobta iyo taariikhda ogeysiiskiisa iyadoo la wacayo/SMS.
Dhanka kale, waxa kale oo aad ka hubin kartaa website-kan adigoo isticmaalaya heerka RSD qaybta https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx, taas oo sidoo kale ka tarjumaysa taariikhda ogeysiinta natiijadaada/appointment, marka la helo. Go’aanka codsigaaga magangalyada wuxuu noqon karaa aqoonsi ama diidmo.
11.	Sideen ku soo gudbin karaa codsi racfaan?
Waxaad foomka codsiga racfaanka ka soo dejisan kartaa qaybta foomamka iyo warqadaha ee degelkan https://rsd.unhcregypt.org/FormsAndLeaflets.aspx. Foomka codsigaaga racfaanka, waa inaad ku dartaa kuwa soo socda:
Sababaha aad u malaynayso in go’aanka taban ee ugu horreeya uu khalad yahay, iyo
Macluumaadkaaga xiriirka oo cusboonaysiiyey.
Waxaad markaas ku soo gudbin kartaa foomka rafcaanka ee sida saxda ah loo buuxiyey ama iimaylka Racfaanka/Dib u furista [email protected] ama adigoo u dhowaanaya Dhismaha RSD ee 44A dariiqa, 2aad ee u dhow, Degmada 8aad, 6 Oktoobar Magaalada maalmaha qaar ee usbuuca, kaas oo waxaa loo sheegi doonaa shakhsiyaadka maalinta ogeysiintooda.
12.	Maxaa dhici doona inta lagu jiro nidaamka racfaanka?
Xubnaha kala duwan ee shaqaalaha ilaalinta UNHCR marka loo eego kuwa ku lug lahaa go’aankii ugu horeeyay ee u horeeyay ee dib u eegis ku sameeya dhammaan codsiyada racfaanka. Dhammaan codsiyada rafcaanku ma horseedi doonaan waraysiga racfaanka. Haddii waraysiga racfaanka loo baahdo, waxaa lagugu ogeysiin doonaa taariikhda waraysiga rafcaanka SMS, waxaana ballanta sidoo kale laga heli doonaa qaybta xaaladda RSD ee website-kan https://rsd.unhcregypt.org/RefugeeResult.aspx.
Haddii go’aanka ugu horreeya la buriyo, waxaa lagu siin doonaa aqoonsi qaxootinimo; haddii go’aanka ugu horreeya la xaqiijiyo, faylkaaga waa la xidhi doonaa.